Home Wararka Xukuumad xilgaarsiin ah ma ansaxin kartaa qaybsiga Kheyraadka dalka? Baarlamaanka 11naad ma...
Xukuumad xilgaarsiin ah ma ansaxin kartaa qaybsiga Kheyraadka dalka? Baarlamaanka 11naad ma aqbali doonaa?
Guddiga wasaaraddaha ee u xilsaaran kasoo talo bixinta iyo isla go’aaminta arrimaha kheyraadka ayaa si wadajir ah u soo jeediyay talooyink ku saabsan hanaanka saami qeybsiga wax soo saarka dalka.
Go’aanka iyo talo ka soo jeedinta gudiga ma aha mid kama danbeeys ah waxa ayna u baahnaan doontaa in ansaxinta dowlada goboleedyada iyo dowlada la soo soo dooran doono. Waxa yaab ah an in dowlad waqtigeedii dhamaaday ay isku mashquuliso in ay sameyn ku yeelato qaybiga kheyreaadka dalka.
Wasiirka Badtoolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa tallaabo muhiim ah ku tilmaamay heshiiskan, sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Heshiiskaan ayaa loo qaatay inuu muhiimad weyn u leeyahay sidii ay dowladda Soomaaliya uga faa’idaysan lahayd kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira dhulkeeda, kaasoo marka hore u baahan in loo sameeyo xeerar.
“Waa talaabo muhiim ah oo hubaashii kaalin ka ciyaareysa dadaaladeena aan ku sahmineyno ugana faa’iideysaneyno kheeyraadkeena, si aan ugu faa’iideyno Qarankeena,” ayuu yiri wasiirka badroolka iyo macdanta XFS Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay hadda isu diyaarinayso in ay ka faa’iidaysato kheyraadkeeda dabiiciga oo noocyo kala duwan leh, waxayna Dowladda Federaalka ku howlan tahay in aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba la fahmo loona diyaar garoobo qaabka loo soo saarayo kheyraadka dalka.